Dubartiin qoccollaa saalaa irra gahe waan himatteef ibiddaan ajjeefamte - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, family handout
Nusraat Jahaan Raafii mana barnootaa keessatti bobo'aan itti firfirfamee ibiddaan gubattee duute. Kun ta'uu isaan torban lama dura garuu Nusraat daareektarrii mana barumsichaa qocoollaa saalaa irraan gahaa akka jiru himattee ture.
Jabinni Nusraat qoccollaa saalaa irra gahe ifatti himachuuufi sana hordofees guyyoota muraasa booda haala sukkaneessaan ajjeefamuun ishee dhimmi miidhaan dubartootaarra gahu ajandaa biyyatti ta'ee akka irratti haasa'amu taasiseera.
Dubartii 'jaalallee ishee ajjeeste foonsaan nyaata qopheessite'
'Dirqiidhaan gudeeduu hambisuuf inni jalqabaa dhiirri of-sassaabuu qaba'
Shamarree ganna 19 fi barattuu mana barnootaa Islaamaa kan taate Nusraat Daayireektara Mana barnootichaan waajira isaattii waamamtee booda haala hin malleen qaama ishee tuttuquu wayita eegalu fiigdee akka baatee himteetti.
Baangilaadeesh keessati dubartootni qoccollaa fi miidhaan saalaa irraatti raawwatamee miidhama isaanii baasanii himuuf maatiifi hawaasarraa dhibbaa irra gahu malu dheensu. Wanti Shamarree Baanglaadesh kana adda godhu baastee himachuu qofa osoo hin taanee maatii waliinmariyachuun dhimmicha gara pooilisiitti geessuu isheeti.
Waajira Poolisitti wayita dhimma ishee himattu haala keessa turte waan dagachiisuu danda'u dhiyeessuun barbaachisaa ta'ee osoo jiruu Poolisiin yaada ishee harkaa fuudhe bilbila moobaayilaan viidiyoo ishee waraabaa ture.
Viidiyicha yeroo Waraabamtu Nusraat, fuula ishee harkaan dhoksuuf yaaltuus Poolisichi dhimmichi ''waan guddaa miti' of dhoksuun si hin barbaachisu jechaa akka ture viidiyoo boodarra harka miidiyaalee galeerraa dhagaahameera.
Nusraat eenyuun ajjeefamte?
Daayireektarri mana Barumsichaa to'annoo jala ooluus Nusraattiitti dubbiin jabaatte. Namoonni hedduun akka namni kun hikamu gaafachuu eegalan. Mormiin barsiisaan kun hidhamuu hin qabu jehu barattoota dhiiraa lamaa fi namoota siyaasaa naannichaa muraasann eegalamee, kaaniis Shamarree kana balaaleffachuun eegale. maatiinis nageenyuummaa Intala isaaniif cinqaman.
Qoccollaan kun irratti raawwatamee bulee isaa qormaata irratti argamuuf obboleessa ishee waliin mana baruumsaa dhaqxe.
''Obboleettii koo mana barumsaa geessuufin yaale mooraatti olseenuuf yaaleen nan dhorkame'' jedha obboleessi Nusraat.
''Osoon ittifamee alatti hafu baadhee wanti akkasii obboleettii koorratti hin raawwatamu ture.''
Madda suuraa, Shahadat Hossain
Nusraat lubbuun darbuu dura yaada poolisiif kenniteen barattuun dubaraa tokko hiriyyaan isaanii tokko reebamaa akka jirti itti himuun gara darbii dhumaa mana barnootaatti ol fudhattee deemuufi achittis namoonni shan Burqa uffatan himata eegalte akka adda kuttu gaafachuu, idheen didnaan ibidda itti qabsiisuu himteetti.
Kutaan qorannoo yakkaa naannichaa yakkichi ofiin lubbuu ofii baasuu akka fakkaatu yaadamee akka ture beeksiseera. Haata'u malee Nusraat osoo lubbuun hin bayiin namootni aqqabuufiin dhugaan akka bahu goodheeras jedha.
''Dubartoonni biyya keenyaa dhiiraa olitti itti gaafatamummaa baatu''
Nusraat Hospitaala wayita geessu 80% qaama ishee gubaatee waan lubbuu ishee baraaruun hin danda'amne.
Riifariin barreefameefi Ambulaansiin waldhaansa fooyya'aaf wayita deemaa turteetti ''barsiisichi natti bu'eera hanga afuurri koo na keessa jirtutti yakka kana nan falma'' jechuun bilbila obboleessa isheen sagalee ishee waraabdeetti.
Namoonni ishee miidhan barattoota mana barumsicha akka ta'aniis himteetti.
Guyyoota shan booda lubbuun kan darbe Nusraat dubbi ijoo miidiyaalee Baangilaadesh taateetti, awwaalcha isheerattis namootni kumoota hedduutti lakkaawaman argmaniiru.
Boodas poolisiin namoota yakka kanaan ajjeechaa kanarratti kan hirmaatan jechuun shakke torba dabalee namoota 15 to'annoo jala oolcheera. Poolisiin wayita dhimma ishee itti himtu viidiyoon waraabes aangoosaarraa akka ka'u taasifameera.
Ministirri muummee biyyattiis maatii Nusraat jajjabeessuun namootni yakka kana raawwatan seera dura akka dhaabatan waadaa galaniiruu.
Ajjeechaa sukkaneessaa Nusraat booda namoonni mucaa durbaa qabaachuu hawwaniis haala akkasii keessatti mucaa durbaa qabaachuun yaaddoo akka ta'e dubbachaa jiru.
Hedduuniis miidiyaalee hawaasummarratti gaddaa fii aarii itti dhagaahamee ibsaa jiru. dubbiin qoccolaa saalaa kuniis dubbii ijoo marii hawaasaa ta'eera.
Akka gareen Baanglaadeesh keessatti mirga dubartootaaf falmu Mahila Pariishaad jedhutti bara 2018 keessa biyyattii keessatti dhimmi dirqiin gudeeduu 940 ta'u gabaafameera. Qorattootni garuu lakkoofsi kun kana caala ta'uu mala jedhu.
Abokaattoo mirga dubartoota kan ta'an Salmaa Alii dubartootni miidha irra gahe himachuufi haqa argachuuf dararaa dabalataa hedduu keessa darbuu, poolisoota biraas dhimmicharratti rincicni jiraa jedhu.
Kuniis dubartootni miidhama isaanii dhokafatanii miidhama isaanii waliin akka jiraatan, yakki kunis akka itti fufu akka godhu dubbatu.
Haata'uutii haawaasni gochoota akkasii balaaleffachuun miidhama dubartootaa hambisuuf yakkoota raawwataman saaxiluun namootni yakka raawwatan seera dura akka dhiyaatan hirmacchuu qabuu jedhu.
Kanaafiis qoccollaa saalaa ilaalchisee barnootni hawaasa dammaqsu kennamuu qabaa jedhu.
'Mariin nageenyaa dhimma koo miti, hojiin koo waraanuudha' Let Jen Baacaa Dabalee
"Ameerikaan garee shororkeessaa TPLF deeggaruu akka hin qabne Baayidanitti himeera"
Yuunivarsitiin Gondar Doktora kabajaa Dr Illeeniif kennee ture haqe
EUn olaantummaa invastimantii Chaayinaan Afriikaa keessatti qabdu dura dhaabbachuuf
Yuunvarsiitiin ragaa barnootaa idileen kenne deebisee mulquun seera qabeessaa?
Mootummaan bakka hedduu deebisee to'achuu himus, TPLF ammoo 'tarsiimoofi' jedhe
Janaraalli waraanaa Sudaan UN akka gargaaruuf waamicha taasise
Barattoonni maatii warra duulanii akka gargaaraniif manni barumsaa torbee tokkoof cufamuuf
"Yeroon qaroo ijaa argadhe, jalqaba haadha koo argeen boo’e"
Raashiyaan abjuun waraana kaasuu Awurooppaatti akka hin jiraanneef akeekkachiifte